लुम्बिनी र फाहियान – Discovery4p.com
Basanta Maharjan History Leaveacomment 1,295 Views
फाहियानले त्यहाँ केही श्रमण भिक्षुहरू पनि देखे । यहाँ उनले सेता हात्तीका रुपमा बोधिसत्व मायादेवीको गर्भमा प्रवेश गरेको दृष्य चित्रित एउटा मूर्ति पनि देखेका थिए । यसरी नै बुद्धसँग सम्बन्धित हरेक घटनाको सम्झनामा सोही स्थानहरूमा बनाइएका स्तूपहरूको पनि दर्शन गरेका थिए । यस नगरबाट ५० ली (१ ली बराबर ५६० मिटर) पूर्वस्थित एक उद्यान थियो । यो त्यही उद्यान हो जहाँ ई.पू. ५६३ मा गौतम बुद्धको जन्म भएको थियो र लुम्बिनी नाउँले अहिले संसार प्रसिद्ध छ ।
लुम्बिनीलगायत भारतका थुप्रै बौद्ध सम्पदास्थलहरूका सम्बन्धमा चर्चा गर्दा हामी प्रायः चिनियाँ यात्रीद्वय फाहियान (ई.सं. ३३७–४२२) र ह्वनेसाङ (ई.सं. ५९६ वा ६०२–६६४) को बरोबर उल्लेख गछौं । बुद्धसँग सम्बन्धित स्थलहरूको भ्रमण, धर्म दर्शनको अध्ययन तथा सम्बन्धित ग्रन्थहरूको संकलनका लागि यिनीहरु यस क्षेत्रको भ्रमणमा आएका थिए र त्यति बेला लेखिएका विवरणहरु नै अहिले ऐतिहासिक महत्वको बनेको हो । फाहियान चीनका एक बौद्ध भिक्षु हुन् । उनी ई.सं. ३९९ मा आफ्नो देश चीनबाट भारततिर हिडेका थिए । उनको यात्रा वृत्तान्त धेरै दृष्टिले महत्वपूर्ण रहेको छ । लुम्बिनीमा फाहियानको भ्रमण ई.संं ४०३ तिर भएको देखिन्छ । यिनी श्रावस्ती नगरबाट आग्नेय दिशाको ५० ली (१२ योजन) को दूरीमा ‘ना–पि–का’ नाउँको गाउँमा पुगे । यसै गाउँमा क्रकुच्छन्द बुद्धको जन्म, पिता–पुत्रको दर्शन र महापरिनिर्वाण भएको थियो र यिनै कुराहरूको सम्झनाका लागि एउटा स्तूप निर्माण गरिएको थियो । यस स्थलले हाल गोटिहवाको नाम पाएको छ । यहाँबाट उत्तर दिशातर्फ एक योजन नुपग्दै अर्को गाउँ आउँछ जहाँ कनकमुनि बुद्धको जन्म भएको थियो । हाल यस स्थलको नाम निग्लिहवा नामले चिनिन्छ ।
कनकमुनि बुद्धको जन्मस्थलबाट एक योजनभन्दा कम दूरीमा हिडेपछि कपिलवस्तु नगरमा प्रवेश गर्दछन् । यति बेला यो नगर उजाड उजाड र उराठ लाग्दो भइसकेको थियो । बुद्धको जीवनकालमै यो नगर कोशलराजको आक्रमणमा परी पतन सुरु भइसकेको थियो । यति बेलासम्ममा त्यहाँ दश घरबाहेक अरु भग्नावशेषहरू मात्रै बाँकी रहेको थियो । फाहियानले त्यहाँ केही श्रमण भिक्षुहरू पनि देखे । यहाँ उनले सेता हात्तीका रुपमा बोधिसत्व मायादेवीको गर्भमा प्रवेश गरेको दृष्य चित्रित एउटा मूर्ति पनि देखेका थिए । यसरी नै बुद्धसँग सम्बन्धित हरेक घटनाको सम्झनामा सोही स्थानहरूमा बनाइएका स्तूपहरूको पनि दर्शन गरेका थिए । यस नगरबाट ५० ली (१ ली बराबर ५६० मिटर) पूर्वस्थित एक उद्यान थियो । यो त्यही उद्यान हो जहाँ ई.पू. ५६३ मा गौतम बुद्धको जन्म भएको थियो र लुम्बिनी नाउँले अहिले संसार प्रसिद्ध छ । लुम्बिनीको वर्णन उनले यसरी गरेका छन्– ‘कपिलवस्तु नगरबाट ५० ली पूर्वमा एउटा बगैंचा छ । बगैंचाको नाम लुम्बिनी हो । त्यहा“ महारानीले एउटा कुण्डमा नुहाएकी थिइन् । त्यसपछि उक्त कुण्डबाट उत्तर कुना भएर माथि उत्रिन् । २० पाइला जति पर उनले आफ्नो हात उठाएर एउटा वृक्षको हा“गा पूर्व दिशा फर्केर समाइन् । यसपछि कुमारलाई जन्म दिइन् । कुमारले पृथ्वी स्पर्श गरी सात पाइला हिंडे । दुईजना नागराजाहरूले कुमारलाई नुहाइदिए । नुहाइदिएको स्थलमा इनार बनाइयो । स्नान गराइएको स्थल इनारमा अद्यावधि श्रमणहरूले पानी लिने गरिरहेका छन् । पानी पिउने गरेका छन् ।’
लुम्बिनीबाट तीन योजन पूर्व हिडेपछि राम नाउँको एउटा जनपद आउ“छ । यो जनपद त्यतिबेला देवदहका नामले पनि चिनिन्थ्यो । बुद्धको महापरिनिर्वाणपछि अस्थिधातु विभाजन गर्दा देवदहका कोलियहरूले पनि एक भाग पाएका थिए । यही अस्थिधातु निदान गरी यहाँ एउटा ठूलो स्तूपको निर्माण गरिएको थियो । यस स्तूपलाई रामस्तूप भनिन्थ्यो भने हाल रामग्राम स्तूपका नाउ“ले प्रसिद्ध रहेको छ । फाहियानले त्यहाँ एक भिक्षु पनि देखे । यी दुई भिक्षुबीच के के कुराकानी भयो, सो कुरा उल्लेख छैन तर तिनका बारेमा वर्णन गरिएको छ । एक पल्ट ती गृहस्थ छँदै रामग्राम स्तूपको दर्शनका लागि आएका थिए । स्तूप ज्यादै उपेक्षित अवस्थामा उनले पाए । त्यहाँ पूजा गर्न आउनेहरू पनि थोरै मात्र हुँदा रहेछन् । तर त्यहाँ हात्तीहरूको समूह थियो । हात्तीहरू डर लाग्दा थिए । उनी ती हात्ती देखेर डराएर झाङमा लुकेर पनि बसे । तर हात्तीहरू सुँडमा नजिकैको पोखरीबाट पानी भरेर ल्याउँथे र स्तूपमा सफा गर्ने गरेको देखे । यसबाट प्रभावित भई स्तूपको हेरचाह गर्न आफै भिक्षु बने । त्यसपछि उनी त्यस जनपदका राजालाई उपदेश दिई प्रभावित पारेर विहार निर्माणार्थ सहयोग पाप्त गरे । यसरी निर्माण भएको उक्त विहारको प्रमखु उनी आफै बने ।
त्यसपछि रामग्राम स्तूपबाट उनी पूर्वतिर लागे । तीन योजनपूर्व हिडेपछि उनले त्यहाँ एउटा स्तूप देखे । त्यो स्तूप सिद्धार्थ गौतमले आफ्नो सारथी छन्दक र घोडा कन्थकलाई फिर्ता पठाएको ठाउँको संस्मरणार्थ बनाइएको थियो ।
Previous लुम्बिनीमा बोटिङ, बाँदरको हातमा नरिवल
Next गाईजात्रा : भ्रममाथि भ्रम